Ahoana ny fomba hahatonga ny millennial hamaky ny lahatsoratrao amin'ny blôginao - Victor Mochere
Manontany tena ianao hoe ahoana no fomba hahatonga ny millennials hamaky ny lahatsoratra ao amin'ny bilaoginao? Mety ho sarotra ny bilaogy ho an'ny mpamaky arivo taona. Saingy miaraka amin'ny teknika mety dia azonao atao ny mamaky ny lahatsoratra ao amin'ny blôginao. Ny arivo taona no be indrindra amin'ny isan'ny mponina manerana an'izao tontolo izao. Izany dia mahatonga ny mpamaky bilaogy arivo taona ho lasibatra hahazoana maso bebe kokoa amin'ny lahatsoratra bilaoginao. Raha jerena izany, ny ankamaroan'izy ireo dia nanorim-ponenana teo amin'ny asany ary lasa vondrona mpanjifa lehibe indrindra.
Arivo taona maro no mandany ny fotoanany amin'ny famakiana bilaogy an-tserasera ary manao hetsika hafa amin'ny Internet. Noho izany, raha te hahomby amin'ny bilaogy momba ny fandraharahana ianao, dia tokony ho ivon'ny sainao ny millennials. Saingy satria misy bilaogy an-taoniny maro an-tserasera, sarotra ny mandresy ny fifaninanana ary misarika ny sain'ny arivo taona. Ho an'ity, hiresaka momba ny fomba azo atao izahay hanampy anao hahazo ny millennials hamaky ny lahatsoratra ao amin'ny bilaoginao ato amin'ity lahatsoratra ity.
Angamba sahirana ny blôginao mba hahazoana ny sain'ny mpamaky arivo taona. Ny olana dia mety tsy araka ny noeritreretinao satria misy anton-javatra maro, toy ny fitondran-tena arivo taona, fampiharana, fampiroboroboana ary fizarana. Noho izany, mila mahatakatra ny mpamaky arivo taona ianao mba hahalalanao ny fomba hamahana ny filan'izy ireo mamaky. Noho izany, apetraho ny tanjonao amin'ny fandraharahana bilaogy ary eritrereto ny fomba hahasoa azy ireo ny lahatsoratra bilaogy avoakanao.
1. Mamoaka vahaolana azo ampiharina mba hahatonga ny millennial hamaky ny votoatinao
2. Ataovy mora ho an'ny millennials ny mamaky ny lahatsoratra ao amin'ny bilaoginao
3. Mampiasà ohatra tena misy avy amin'ny arivo taona mba hisarihana ny sain'izy ireo
4. Ampidiro fihetseham-po ny blôginao mba hamakiana azy ireo
5. Ampiroborobo ny blôginao amin'ny media sosialy mba hisarihana ny arivo taona
6. Zarao ho sokajy samihafa ny hafatrao
7. Ampidiro hatsikana mba hahatonga ny arivo taona hamaky ny lahatsoratra ao amin'ny bilaoginao
8. Mampiasà horonan-tsary, infografika, ary sary mahasarika hafa
9. Araho ny fandaharam-potoana fandefasana tsy tapaka mba hisarihana ny mpamaky millennials
10. Mifantoha amin'ny olana ara-tsosialy mba hahatonga azy ireo hamaky ny lahatsoratrao
11. Manangana sehatra fanehoan-kevitra mora ampiasaina
Vonona ve ianao ny hahazo ny arivo taona hamaky ny lahatsoratra ao amin'ny bilaoginao?
Taranaka be atao ny arivo taona; tsy izy ireo ihany fa samy sahirana daholo amin'izao fotoana izao. Be dia be ny tokony ho vitantsika, saingy kely ny fotoana. Noho izany, ny olona dia mila vahaolana haingana amin'ny olany ary mila torohevitra azo ampiharina azony ampiasaina. Izany hoe, raha te hisarika ny sain'ny millennials amin'ny alàlan'ny fanoratana lahatsoratra bilaogy ianao dia tokony hamoaka vahaolana azo ampiharina.
Tsy maninona izay sehatra na vokatra na serivisy atolotrao. Aoka ho zava-misy ao amin'ny blôginao. Ny famakiana fotsiny ny lohatenin'ny blôginao dia afaka mandresy lahatra ny mpamaky fa hahazo torohevitra azo ampiharina avy amin'ilay lahatsoratra izy ireo. Raha mampihatra an'io tetika fitorahana bilaogy io ianao, dia hampitombo be ny vintana hisarihana mpamaky arivo taona sy hampitombo haingana ny blôginao.
Ny lafiny iray lehibe amin'ny fitorahana bilaogy izay tsy ampiasain'ny mpitoraka bilaogy dia tsy mihevitra ny ho mora amin'ny mpamaky ny mandany ny atiny. Koa manontania tena hoe:
Ho sarotra amin'ny mpamaky ve ny mamaky ny blôginao?
Afaka mijery ny atiny ve ny mpamaky kendrenao?
Afaka mitsambikina any amin'ny faritra tena iankinan'ny pejy ve ireo izay tsy te hamaky ny lahatsoratra manontolo ary hamaky izay mampientanentana azy ireo?
Ny mpamaky bilaogy arivo taona dia nanao fandrosoana lehibe tamin'ny fomba namakiany lahatsoratra bilaogy. Raha tokony hamaky ny pejy iray manontolo, ity vondrona mpijery bilaogy ity dia tia mijery pejy iray mba hahitana antsipiriany mifanaraka amin'izy ireo. Noho izany, ny fanaovana scannable ny atiny dia manamora ny famakiana ny votoatin'ny blôginao ny millennials. Arak'izany, amboary ny lahatsoratrao mba ho fantatra haingana ny antsipiriany lehibe. Mampiasà singa scannability hitarihana ny mpamaky amin'izay tiany hovakiana.
Raha te-hamaky ny blôginao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ianao, dia misy zavatra iray tsy tokony hodian-tsy hita. Mampiasà ohatra tena misy eo amin'ny fiainan'ny arivo taona mba hanamafisana ny atiny. Nahoana no zava-dehibe izany? Ny tsy fahafahana mifandray amin'ny atiny dia iray amin'ireo antony lehibe indrindra tsy misy mamaky ny lahatsoratra ao amin'ny bilaoginao. Saingy rehefa mizara traikefa sy ohatra avy amin'ny olona tena izy (millennials) ianao dia mifandray amin'izy ireo.
Ataovy tonga saina amin'ity sokajin-taona ity fa namolavola ny atiny manokana ianao mba hanomezana izay ilainy. Ankoatr'izay, rehefa mahita tranga avy amin'ny traikefa niainany voalaza ao amin'ny lahatsoratra bilaogy novakiny ny mpamaky dia lasa mirotsaka bebe kokoa izy ireo. Noho izany, ampiasao ohatra tena misy maro avy amin'ny fiainan'ny arivo taona mba hanamafisana ny lahatsoratra bilaoginao. Azonao atao ny manadihady ireo namanao sy mpamaky arivo taona mba hahafantaranao ireo modely amin'ny fiainany andavanandro izay mifanaraka amin'ny votoatin'ny blôginao.
Taranaka feno fihetseham-po ny Millennials. Noho izany, tsara raha fohazinao ny fihetseham-pony mba hahatonga azy ireo hamaky ny blôginao. Ahoana? Amin'ny fampidirana fihetseham-po sy fientanentanana ao amin'ny lahatsoratra bilaoginao. Raha jerena izany, mba hisarihana ny fon'ny mpamaky arivo taona, dia tsy maintsy ho mahay ianao amin'ny fampidirana fiaraha-mientana amin'ny fanoratana votoaty. Ary ampiasao izany ho tombontsoanao rehefa mamorona lahatsoratra ho an'ny mpamaky arivo taona.
Ny olon-drehetra dia mampihetsi-po, fa ny arivo taona dia mihetsi-po kokoa amin'ny natiora. Ny fikarohana dia milaza fa ny lehilahy arivo taona dia manome lanja ny fihetseham-po mihoatra noho ny hery ara-batana mba hanohanana izany. Alaivo sary an-tsaina hoe manao ahoana ny fihetseham-pon'ny vehivavy arivo taona raha toa ka be fitiavana kokoa ny lehilahy arivo taona. Amin'ny ankapobeny, ny vehivavy dia mazoto kokoa noho ny lehilahy.
Noho izany, raha manana fientanam-po ny lahatsoratry ny bilaoginao, dia ho mirona ho azy ireo ny mpamaky bilaogy arivo taona. Noho izany, miezaha hampiditra fihetseham-po ao amin'ny blôginao. Tsy maninona na inona na inona fihetseham-po afangaronao ao amin'ny blôginao; alahelo, hatezerana, fahasambarana, na inona na inona mifandray amin'ny millennial. Indraindray, lasa mihetsi-po be ny mpamaky arivo taona ka mizara ny bilaoginy amin'ny namany amin'ny media sosialy.
Maherin'ny 90% amin'ny arivo taona no mampiasa media sosialy. Noho izany, mba hahatratrarana ny millennial amin'ny votoatin'ny blôginao dia tokony hampiroborobo ny votoatinao amin'ny media sosialy ianao. Ny taranaka arivo taona dia mampiasa sehatra media sosialy marobe isan'andro, izay midika fa ny media sosialy no toerana ahitanao ny ankamaroan'ny millennials. Raha jerena izany dia tsara ny mampiroborobo ny blôginao amin'ny media sosialy.
Amin'ny fanaovana izany dia afaka manatona na dia ireo izay mbola tsy mahafantatra momba ny bilaogin'ny orinasanao aza ianao. Saingy, mba hahatonga ny millennials hankany amin'ny blôginao ary hamaky azy ireo, misy zavatra tsotra tokony ho azonao antoka. Ny lohahevitra apetrakao amin'ny media sosialy dia tokony hahaliana, ary ny blôginao na ny tranokalanao dia tsy maintsy manintona azy ireo.
Manintona ny saina ny filaminana fa tsy ny fikorontanana. Rehefa mahita zavatra milamina ianao dia milamina ny sainao satria tsy misy korontana ny zavatra hitanao. Mifanohitra amin'izany aza, rehefa mahita zavatra mikorontana ianao dia misy korontana. Vokatr'izany, manomboka tsy milamina ny sainao, ary mahatsapa ny faniriana hiala amin'izany ianao.
Raha jerena io fahatakarana io, ny fomba iray hanatrarana ny millennial mamaky ny blôginao dia ny fametrahana filaminana ao amin'ny blôginao. Ny fanalahidy dia ny fizarana ny lahatsoratra ao amin'ny blôginao ho sokajy samihafa araka ny lohahevitra. Ohatra, ny lahatsoratra mifandraika amin'ny fahasalamana dia tokony hanana fizarana manokana. Ny lahatsoratra momba ny fandraharahana na ny vokatra dia tokony ho ao amin'ny fizarana mifanaraka amin'izy ireo, ary ny toy izany. Mandeha ity tetika bilaogy ity.
Fantatrao ve fa ny arivo taona no taranaka sahiran-tsaina indrindra hatramin'izay? Ny fikarohana dia naneho fa amin'ny ambaratonga 1 ka hatramin'ny 10, ny arivo taona dia manana salan'isa 5.7, ambony noho ny taranaka hafa. Ny ankamaroan'ny arivo taona dia tia zavatra izay afaka mitondra tsiky eo amin'ny tarehiny. Noho izany, ataovy mihomehy izy ireo ary mampihena ny haavony. Ahoana anefa? Asio hatsikana ao amin'ny blôginao isaky ny azo atao. Tsy isalasalana fa tsy afaka mampiasa vazivazy foana ianao, fa ampiasao izany na aiza na aiza ilaina. Ity hack bilaogy ity dia hahatonga ny arivo taona ho tia ny blôginao ary ho tonga mpitsidika miverimberina.
Mahasarika ny maso ary tian'ny rehetra. Arakaraka ny betsaka kokoa ny horonan-tsary, sary, ary infografika ampiasainao amin'ny lahatsoratry ny blôginao, dia vao mainka ny fahafahan'ny arivo taona ho avy hamaky ny blôginao. Fanampin'izany, amin'ny endrika votoaty hita maso rehetra, ny horonan-tsary dia mankafy ny fitiavana manokana ao am-pon'ny olona rehetra. Ny lazan'ny TikTok sy Instagram reels dia porofo manan-danja izay manasongadina ny safidin'ny atiny video.
Aleon'ny Millennials mijery votoaty video mba hahitana vaovao, ao anatin'izany ny fianarana marika sy vokatra na serivisy vaovao. Maherin'ny 60% sy 50% amin'ny arivo taona no tia mijery horonan-tsary iray minitra sy 2-5 minitra, ary ny ambiny kosa mijery horonan-tsary 6-10 minitra isan'andro. Noho izany, ampiasao horonan-tsary fohy ao amin'ny lahatsoratry ny blôginao raha azo atao.
Na dia tsara indrindra aza ny mamorona ny horonan-tsarinao, azonao atao ny mampiditra horonan-tsary avy amin'ny YouTube miaraka amin'ny crédit amin'ny tompony. Amin'izao fotoana izao, misy tranonkala fanovana horonantsary marobe azonao ampiasaina hamoronana horonan-tsary tena tsara izay hiteraka fiantraikany maharitra amin'ny mpihaino anao. Raha tsy afaka mampiasa horonan-tsary ianao dia mandehana amin'ny sary, infografika ary meme. Avelao hanintona ny blôginao ireo akora hita maso ireo ary hitondra mpamaky bebe kokoa.
Ny teniny dia manan-kery amin'ny fitiavana am-pitiavana sy ny karazana fitiavana rehetra, ao anatin'izany ireo izay zarainao amin'ny mpanjifanao sy ny mpamaky bilaogy. Rehefa tsy mivadika amin'ny ezaka fitorahana bilaogy ianao dia fantatry ny olona izany. Fantatr'izy ireo ny fotoana hidirana ao amin'ny blôginao mba hamaky zava-baovao. Ity fomba fiasa ity dia azo antoka fa mampitombo ny fironan'ny mpanjifa na ny arivo taona amin'ny blôginao. Alaivo sary an-tsaina hoe namaky bilaogy iray ianao dia tianao izany. Azo inoana fa hiverina hitsidika ny tranokala ianao amin'ny fanantenana hamaky lahatsoratra bilaogy vaovao. Saingy, rehefa tsy mahita lahatsoratra bilaogy vao haingana ianao dia lasa mieritreritra ny hiverina haingana hamaky lahatsoratra vaovao.
Miverina ianao fa indrisy, mbola tsy misy lahatsoratra bilaogy vaovao. Ho diso fanantenana ianao, amin'ny fanatsoahan-kevitra fa tsy mavitrika ny bilaogy ary tsy hitsidika ilay tranokala atsy ho atsy. Saingy raha ny marina, ny tompon'ny bilaogy dia mandefa na mamoaka lahatsoratra bilaogy vaovao iray isam-bolana. Tsy fantatrao izany ary tsy namaky ny bilaogy intsony ianao. Ankehitriny, raha fantatry ny mpamaky ny fatran'ny blôginao, dia mety hifikitra amin'izany izy ireo. Noho izany dia tsy maintsy manaraka fandaharam-potoana famoahana tsy tapaka ianao. Ity fomba famoahana bilaogy ity dia fomba tsara handrosoana.
Ny iray amin'ireo toetra iraisan'ny millennial rehetra dia ny fahatsapana ny olana ara-tsosialy. Ny arivo taona dia taranaka manahy mafy momba ireo olana manelingelina ny planeta, ny tontolo iainana, ny olona ary ny karazana hafa. Ny fikarakarana ara-pahasalamana, ny fanavakavahana, ny fihenan'ny fahasalaman'ny planeta, ny fandotoana ary ny ady dia olana lehibe izay mampanahy ny ankamaroan'ny taonarivo. Tena manahy momba ireo olana ireo ity sokajin-taona ity ary maniry ny hitondra fiovana tsara momba ireo fanamby ireo.
Noho izany, tena manohana olona, ​​fikambanana ary orinasa mifantoka amin'ny famahana azy ireo izy ireo. Midika izany fa ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hisarihana ny fon'ny arivo taona sy hahatonga azy ireo hamaky ny blôginao dia ny fifantohana amin'ny olana ara-tsosialy. Ireo lohahevitra voalaza etsy ambony ireo dia mety tsy mifandray amin'ny niche blôginao, fa afaka mahita lohahevitra malaza mifandraika amin'ny indostrianao ianao mba hivoatra. Tsy maninona na te hifantoka amin'ny bilaogy mifandraika amin'ny vokatrao sy ny serivisinao ihany.
Tokony hampiditra lahatsoratra sasantsasany momba ny olana ara-tsosialy ianao indraindray. Manampy amin'ny fampitomboana ny mpamaky blôginao izany. Tsarovy fa ny millennials dia vondron'ny mpanjifa an-tserasera izay mikarakara fampahalalana haingana kokoa ary mianatra haingana kokoa noho izay azonao eritreretina. Noho izany, raha tsy mifanaraka amin'ny fironana sy lohahevitra vaovao mifandray amin'izy ireo ny blôginao. Noho izany, manara-maso:
Teny fikarohana malaza
Lohateny sy tenifototra malaza
Tandremo ireo lahatsoratra amin'ny haino aman-jery sosialy zaraina sy tiana tsy tapaka amin'ny fahanao sy ny famahanan'ny mpifaninana
Ireo hetsika ireo dia hanampy anao hamorona sy hamoaka votoaty mifandraika amin'izany izay hahatonga ny arivo taona ho avy hamaky ireo lahatsoratra ao amin'ny bilaoginao.
Amin'ny maha-olombelona antsika, ny iray amin'ireo faniriantsika raiki-tampisaka dia ny maneho hevitra. Ny famelana ny mpamaky anao hanome feo ny heviny, hifanerasera aminao sy ny mpamaky hafa ao amin'ny blôginao dia fomba tsara hanovana azy ireo ho mpamaky miverimberina. Tsy heverinao ve fa zava-dehibe ny fahafahanao mametraka fanontaniana, mifanakalo hevitra momba ny hevitrao, na maneho ny tsy fitovian-kevitrao amin'ny zavatra novakianao tao amin'ny bilaogy?
Rehefa dinihina tokoa, dia nanokana fotoana sarobidy hamakiana ny fitaovana, ary fara faharatsiny, dia tokony hahazo izany fahafahana be izany. Raha azonao io hevitra io, dia azonao ny fihetsehan'ny ankamaroan'ny mpamaky. Te hanandratra ny feony koa izy ireo, ho henoina, ary ho lasa ampahany amin'ny vondrom-piarahamoninao bilaogy. Noho izany, tokony hanangana sehatra fanehoan-kevitra bilaogy mora ampiasaina ho an'ny mpamaky anao ianao. Tokony ho tsotra tsy misy fombafomba.
Ny arivo taona no vondrona mpanjifa lehibe indrindra amin'izao fotoana izao. Tokony hifantoka amin'izy ireo ny ezaka ara-barotra blôginao. Saingy, ny fahazoana milenial hamaky ny blôginao sy hifikitra amin'izany mandritra ny fotoana maharitra dia mitaky ezaka tsy tapaka. Ireo teboka voalaza etsy ambony dia manome anao ny fitarihana hampita ny ezaka ataonao mba hisarihana ireo mpamaky bilaogy arivo taona. Andramo izy ireo ary jereo ny fitomboan'ny mpamaky ny blôginao.